Waa in la casriyeeyo soonayaasha laga hubi amniga warshada Nukliyeerka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waa in la casriyeeyo soonayaasha laga hubi amniga warshada Nukliyeerka
La daabacay fredag 22 april 2016 kl 10.54
Strålsäkerhetsmyndigheten"Xaduudo Juquraafi ahaan la yaqaano"
Warshada quwadda nukliyeerka ee Oskarshamn. Foto: Mikael Fritzon/Scanpix.
Warshada Sweden quwadda nukleyrka waxay leeyahiin soonayaal loogu talogalay in lagu hubiyo amniga.
Laakiin soonayaashaan loogu diyaargaroobo haddii warshadda nukliyeerka wax ka dhacaan ayaa ah kuwo gabow ah, siday aamiinsantahay hey’adda amniga ee shucaaca nukliyeerka.
Jan Johansson oo hey’addan ka howl-gala qeybta qaabilsan diyaargarowga ayaa sheegay in markii la hirgeliyey soonayaasha siddeetamadii qalabka la adeegsado uu ahaan telefoon.
– Soonayaasha waxaa laga hirgeliyey warshada nukliyeerka sideetamaadkii. Digniinta guriga guddahiisa waxaa loo adeegsan jiray telefoon otomaatig u soo dhaca. Markas ayaa la hirgelin jiray soonayaasha diyaargarowga iyadoo la adeegsnayo goobo telefoono ku xiran yahii
– Waagas qabkaani waa haboonaa. Laakiin caalamka intiise kale meesha ayaa laga saaray qaabkan digniinta loo adeegsan jiray, waana la casriyeey nidaamkii telefoonada, ayuu yeri Jan Johansson.
Qaabkan loo qeybiyo soonayaasha diyaargarowga oo ka jira dhamaan warshadaha nukliyeerka Sweden ma ahan mid cad oo buuxinaya sharudaha caalamiga ah, sida sheegtay hey’adda ka hortagga shucaaha nukliyeerka.
Nidaamkan ayaa Sweden ka hirgalay siddeetameeyadii waxuuna ku dhisanyahay goobo telefoono ku xiran yahiin, nidaamkan oo guud ahantiis laga guuray caalamka intiise kale.
Laakiin ayaa dib u eegis lagu sameyn doonaa xaduudaha soonayaasha. Soonayaasha cusubna waa in ay leeyahiin xaduudo juguraafi aahaan la yaqaano, sida wadooyin ama biyo mareeno, ayuu yeri Jan Johansson oo horumood ka ah baaritaanka hey’adda ka hortagga shucaaca nukliyeerka.